Nodimandry i Brandy Rodriguez, mpiaro ny vondrom-piarahamonina LGBTQ ao Trinidad sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Tsy hohadinoina na ho voasolo na oviana na oviana ny adiny hoan'ny zon'ny Trans sy ny toe-tsainy tsy mety levona.
Voadika ny 01 Novambra 2021 13:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, Dansk, English
Pikantsarin'ilay mpikatroka LGBTQ+ Trinbagoniana Brandy Rodriguez nalaina tao amin'ny mombamomba azy tao amin'ny YouTube nandritra ny fankalazany ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy, tamin'ny alalan'ny fantsona Soyini Nneka.
Nodimandry i Brandy Rodriguez, iray amin'ireo mpanova fananahana sady mpikatroka LGBTQ+ sahy miteny indrindra ao Trinidad sy Tobago. Nofaritan'ny namany ho “tampoka” ny fahafatesany ny marainan'ny 28 Oktobra, niteraka fampiononana marobe tao amin'ny fantsona media sosialy.
Maro no nahatsiaro an'i Rodriguez ho mpiaro ny zon'olombelona sady mpiaro ny zon'ireo mpanova fananahana, ​​ka namoahan'ny Fiaraha-mientan'ny Transgender ao Trinidad sy Tobago (izay izy no filohany) ny sarin'ilay “mpitarika tsy mana-tahotra” naseho niaraka tamin'ny Sertifikà Commonwealth Points of Light faha-180. Nankasitraka ny asany ho an'ireo vondrom-piarahamonina marefo transgender sy LGBTQ+ eo an-toerana, izay matetika voahilikilika sy mahita ny tenan'izy ireo miezaka mafy hiavo-tena ao anatin'ny fiaraha-monina ilay mari-pankasitrahana. Voninahitra iray noheverin'ny maro fa “tsy mampino ary mendrika” izany, satria mankalaza ireo asa an-tsitrapo manainga fanahy manerana ny Commonwealth izany, mikasika ireo fanamby ara-tsosialy maika.
Nalahelo i Harriet Cross, Kaomisera Ambony Britanika ao Trinidad sy Tobago, izay nanolotra an'i Rodriguez ny loka rehefa nandre ny fahafatesany:
Tena malahelo aho nandre tamin'i @trinijayjay fa maty i Brandy Rodriguez. Nankasitraka ny asa miavaka vitan'i Brandy tamin'ny fanohanana ny vondrom-piarahamonina transgender sy ny zon'ny LGBT + ny Mpanjakavavy Heni-Piandrianana, nanome ny mari-pankasitrahana Commonwealth Points of Light. Manan-toetra mpanjaka ?? i Brandy ary kevoka aho nahafantatra azy.
Fahavoazana lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ ao an-toerana ny fahafatesan'i Rodriguez, amin'ny ampahany noho ny fivelaran'ny asany mahatratra ny ifotony. Nanampy tamin'ny famoronana toerana azo antoka sy hirika ara-toekarena ho an'ireo vehivavy transgender izy nandritra ny 20 taona mahery, fa maro tamin'izy ireo no mety nivadika hivaro-tena noho ny tsy fahampian'ny safidy hafa. Nanao asa be dia be tamin'ny olona mitondra VIH ihany koa izy, nitarika hetsika iray hahazoana antoka fa afaka mahazo fanafody ilainy izy ireo, sady niteny tamin'ny fampitsaharana ny fanilikilihana ny voan'ny aretina.
Rehefa nahazo ny mari-pankasitrahana Points of Light izy tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nilaza tamin'ny the Trinidad and Tobago Newsday i Rodriguez fa nanome tosika azy hanohy ny asany izany:
Ity loka ity […] dia hanosika ahy hanohy hanazava ny maha zava-dehibe ny fampiatina ny olona rehetra, indrindra ny vondrom-piarahamonina transgender. Hampiasaiko ihany koa izy io mba hampamirapiratra ny maha zava-dehibe ny zo ara-pahasalamana momba ny fananahana sy firaisana ara-nofo. Fantatro fa rehefa miaraka isika rehetra dia ho afaka hamorona [Trinidad sy Tobago] ahafahan'ny tsirairay mahazo aina sy malalaka ho an'ny tenany.
Nanamarika ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy tamin'ny taona 2020 i Trinidad sy Tobago tamin'ny fanasongadinana ny asa fanoroan-kevitr'i Rodriguez ho an'ny Fikambanan'ny Mpivaro-tena ao Trinidad sy Tobago, sy ny fitarihany tsy misy fisasarana ao amin'ny Fiaraha-mientan'ny Transgender Trinidad sy Tobago, izay notarihiny nanomboka tamin'ny taona 2017 mandra-pahafatiny:
Nitarika ezaka ho amin'ny fidirana an-tsehatra miaraka amin'ireo FTMF=ONG, Governemanta ary vahoaka manan-danja amin'ny alàlan'ny fanomezam-bahana ny fiarahamonina izy, ary kasinga goavana tamin'ny fampandrosoana ny zon'ny Transgender ao Trinidad sy Tobago. Nanao tolo-tanana tamin'ny fampihenana ny fanilikilihana, ny fanavakavahana ary ny herisetra mihatra amin'ireo vondrona voahilikilika – indrindra ireo niova ho vehivavy ny asany.
Miavaka i Brandy noho ny herim-pony, ny fanetre-tenany, ny tsi-fitiavan-tenany, ary ny fanoloran-tenany hanome hery ny fiainan'ireo izay tsy re ny feony.
Natokany ho amin'ny fampitsaharana ny fanavakavahana ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+, sy hiantohana ny fahafahan'ny mpikambana ao aminy hahazo servisy ara-pahasalamana sy hirika ara-toekarena mitovy sy sahaza ny fiainan'i Rodriguez. Araka ny tenin'i Jason Jones, izay nahomby tamin'ny fandravana ireo lalàna efa lany andro naharitra ela manohitra ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy tao Trinidad sy Tobago tamin'ny fandresena ara-pitsarana tamin'ny taona 2018 izay nanambara fa tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ireo lalàna ireo:
Andry teo amin'ny vondrom-piarahamoninay nandritra ny am-polony taona maro i Brandy ary nanao dingana lehibe tamin'ny ady ho an'ny hitsiny sy ny fahalalahana ho an'ny olom-pirenena LGBTQ+. Tsy hohadinoina na hosoloina na oviana na oviana ny ady nataony ho an'ny zon'ny Trans sy ny toe-tsainy tsy mety levona. Tena hafa karazana izy. Mandria am-piadanana Brandy. ?️‍⚧️?✊?????